ओठ फुट्ने समस्याको समाधान कसरी गर्ने ? - Nepali Health Media
ओठ फुट्ने समस्या: हाम्रो ओठको छाला अति नै पातलो र कमजोरी हुन्छ। यसलाई कुनैपनि मौसमी कारण, सुख्खा हावा, चिसो मौसम, र घाम को प्रकाश ले सजिल्यै असर गर्न सक्दछ।
ओठ फुट्ने समस्या हर कोहि लाई हुने सामान्य समस्या भए पनि ओठ फुटेर हुने जलन भने खपी नसक्ने गरिको हुँदछ । अझ के ही ब्यक्तिहरुमा त ओठ फुटेर रगत पनि आउने गर्दछ।
त्यसैले ओठ फुट्ने कारणहरु र यसको उपचार विधिलाइ तपाईंले थोरै ख्याल गरे ओठ फुट्ने समस्याबाट बाट मुक्त बन्न सक्नु हुनेछ।
ओठ फुट्ने कारणहरु :
मौसमी कारण :
मौसमी कारणमा चिसो मौसम, सुख्खा हावा आदि पर्दछन । यो बेला ओठ लाई बचाउन सके ओठ मौसम कट्दै कारण फुट्न पाउँदैन ।
जिब्रोले ओठ चाट्ने बानीका कारण:
जिब्रोले ओठ चाट्दा मुख भित्रको र्याल र मुखमा भएको ब्याक्टेरिया ओठमा परी असर गर्ने कारणले गर्दा पनि ओठ फुट्ने गर्दछ ।
दैनिक दाँत ब्रस नगर्ने कारण :
दैनिक दाँत ब्रस नगर्दा मुख भित्र ब्याक्टेरियाले राज्य बनाउँछ र कुनै बेला ओठले जिब्रो छुँदा वा मुख को थुक वा र्याल ओठ मा पर्दा ओठमा ब्याक्टेरिया परी ब्याक्टेरिया ले असर गर्दछ र ओठ फुट्ने गर्दछ।
पानी कम पिउँने कारण :
पानी कम पिउँदा शरीरमा पानी कम भै शरीर निर्जलीकरण हुन्छ, यो निर्जलीकारण को पहिलो लक्षण नै ओठ सुख्खा भै ओठ फुट्नु हो ।
मुखले स्वास प्रस्वास गर्ने कारण :
नाक ले स्वास प्रस्वास नगरी मुखले स्वास प्रस्वास गर्दा यसले ओठ सुख्खा हुन पुग्दछ जसको कारण पनि ओठ फुट्ने गर्दछ। त्यसैले मुख बन्द गरेर नाकले स्वास प्रस्वास गर्नु पर्छ ।
अति चर्को, पिरो खाने खानाको कारण :
यदि अति चर्को पिरो जस्ता बढी चखिलो खानेकुरा ओठ मा पर्दा ओठ को छाला कम्जोर र पातलो हुने करण पनि ओठ फुट्ने गर्दछ। ओठ फुट्ने अन्य पनि विविध कारणहरु हुन्छन खैर ओठ फुट्ने धेरै करणहरु भन्दा समाधान तिर बढी फोकस गरौँ।
यी तलका विशेष स्वास्थ्य जानकारीहरु पनि पढ्नुहोस :
ओठ फुट्ने समस्या को समाधान कसरी गर्ने ?
ओठ फुट्ने समस्या को समाधान गर्ने जम्मा २ विधि नै फलोअप गर्न जरुरी पर्दछ
1. बानीमा सुधार गर्ने विधि :
ओठ चाट्ने बनी भएका ले ओठचाट्न छोड्ने: यसो गर्दा मुख को ब्याक्टेरिया ओठ मा पर्न पाउँदैन साथै र्याल ओठ मा नपर्दा ओठ बढी सुख्खा हुन पाउदैन।
मुख बाट होइन नाक बाट स्वास फेर्ने : मुख बाट स्वास लिँदा ओठ सुख्खा हुने गर्दछ र ओठ फुट्ने गर्दछ। त्यसले नाक बाट स्वास लिने गर्नु पर्दछ।
दाँत दैनिक माझ्ने, सके दिन मा २ पटक : दाँत दैनिक माझ्ने बनी गर्दा ओठ फुट्ने समस्या कम हुने गर्दछ, दाँत मन्जन ले ओठमा ब्याक्टेरिया को असर कम गराउँदछ भने मुख मा पनि ब्याक्टेरिया बढ्न पाउँदैन र ओठ फुट्न धेरै कम हुँदछ।
ओठ हात ले नछुने : धेरैको बनी हुन्छ हात ले ओठ छुने, तर नधोएको हातमा ब्याक्टेरिया हुने भएको हुँदा ओठमा असर गर्दछ र ओठ फुट्ने हुँदछ।
दाँत ले ओठ नटोक्ने : दाँत ले ओठ तोक्दा वा फुटेको ओठ को छाला दाँतले तोकेर फ्याक्ने बानी गर्दा ओठ झन् बढी फुट्ने गर्दछ र अझ बढी ओठ समस्या बढ्ने छ।
पानी बढी पिएर निर्जलीकरण हुन बाट बच्ने , निर्जलीकरण हुँदा पनि ओठ फुट्ने गर्दछ। त्यसैले पानी बढी पिउने।
2. उपचार विधि:
सबै भन्दा सर्बोत्तम उपाय ओठ मा लगाइने भ्यास्लिन लगाई रहने, यो ओठ मा लगाउने किसिमको भ्यास्लिन जसले ओठ फुट्ने समस्या लाइ ठिक गर्दछ। तर जुन सुकै भ्यास्लिन भने ओठमा लगाउनु हुँदैन। बजार मा पाइने ओठ कै लागि निर्मित भ्यास्लिन मात्र प्रयोग गर्नु पर्दछ।
ओठलाई सुख्खा हुनबाट बचाउनको लागि ओठमा चिल्लो किसिमको तत्वहरु लगाउने, जस्तै कि घिउ, ओठ मा लगाउने किसिम को भ्यास्लिन, तेल, आदि लगाउने गर्दा ओठ सुख्खा भै फुट्न बाट बचाउन सकिन्छ।
ओठ फुट्न कम गराउन को लागि नारिवन को तेल लगाउन सकिन्छ
ओठ मा घ्युकुमारी लगाउने गर्दा पनि ओठ फुट्ने समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
दैनिक मह लगाउने गरे ओठ फुट्ने समस्या हराउछ भने ओठ पनि कोमल र नरम बन्दै जाने छ। सकिन्छ भने गुलाब जल र मह मिसाएर लगाए अझ उत्तम
काँक्रा काटेर त्यसबाट निस्केको चोप लाइ ओठ मा लगाउने गर्दा पनि ओठ फुट्ने समस्या बाट छुटकारा पाउन सकिन्छ
Tags: #nepalihealth #nepalihealthmedia #nepalihealthtips nepali health nepali health media Nepali Health tips nepalihealth tips news2nepal उपचार ओठ ओठ फुट्नु ओठ फुट्ने समस्या ओठ फुट्ने समस्या को समाधान ओठ फुट्ने समस्या। को घरेलु फुट्ने समस्या